बन्दले फिल्म डुबे, कलाकार थन्किए
गृहपृष्ठ » चलचित्र » बन्दले फिल्म डुबे, कलाकार थन्किए
बुधबार ३० पुस, २०७१
देशभर विभिन्न नाममा हुन थालेका बन्दले फिल्म नगरीलाई पनि ठूलो असर परेको छ । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएका ३ ठूला फिल्मलाई बन्दले नराम्रोसँग थन्काएको छ ।
‘अलबिदा’का निर्माता हसन खान बन्दका कारण व्यापार कमजोर बनेको बताउछन् । ‘आभाष’का निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले फिल्म राम्रो रहेको प्रतिक्रिया आउँदा आउँदै पनि बन्दका कारण व्यापार राम्रो नभएको बताए । यता ‘तथास्तु’ पनि बन्दका कारण मारमा पर्‍यो ।
यी ३ फिल्म प्रदर्शनमा आएको दिनदेखि विभिन्न पार्टीले विभिन्न स्थानमा बन्दको आयोजना गरिरहेका छन् । बन्दका कारण फिल्मको व्यापार मात्र कमजोर बनेको छैन फिल्मीकर्मी पनि घरमै थन्किएका छन् ।
अभिनेता राजेश हमालले बन्दका कारण आफ्ना कामहरू स्थगित भएको फेसबुकमा जनाएका छन् । हमालले फेसबुकमा सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको भन्दै घरमै पुस्तक पढेर र फिल्म हेरेर समय बिताएको लेखेका छन् । हमालको जस्तै कुरा अन्य कलाकारको पनि छ ।
माघ ५ गते नेपाल बन्द र त्यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न नाममा बन्द हुँदा फिल्मीकर्मी समस्यामा परेको पाइन्छ । माघ २ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा लागेका ‘इच्छा’लाई बन्दले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जसका कारण ‘इच्छा’को प्रदर्शन मिति केही पर सार्ने तयारी पनि गरिएको छ ।
सुपरस्टार खानलाई लिएर बलिउड अभिनेत्री कंगनाले दिइन सबैं चकित्त हुने बयान !
शाहरुख खानको फिल्मबाट करीना यसकारण बाहिरिइन् ? अब कसको सम्भावना बढी…
नेपाली कथानक चलचित्र ‘जय श्री दाम’ आजबाट प्रदर्शनमा !
बलिउडमा तीन खान असफल हुँदा अक्षय कुमार चर्चाको शिखरमा ! [कारण थाहाँ पाउँदा सबैं हैंरान]
जब नेपाली सुपरस्टार एकसाथ क्यामेरामा देखिए ! [तस्विर सहित हेर्नुहोस्]
मनोज गजुरेल-मीना ढकाल : सम्बन्ध बिच्छेद पछि पत्नी गायिका पति नायक !
ओली सरकारलाई लिएर महानायक हमालले मुख खोले !
धेरै समय पनि यस्तो चलचित्रमा अभिनय गर्दै अनुश्का
सलमानको ‘रेस ३’ यस कारण प्रतिबन्ध
विश्व कै ​रेकर्ड तोड्यो ‘एभेन्जर्स’ ले
प्रियंकाद्धारा अभिनित ४ चलचित्र एकै पटक हलमा
सञ्जय दत्तको जीवनी आधारित फिल्म सञ्जुको टिजर सामाजिक सञ्जालमा बन्यो भाइरल
हेर्नुहोस् बार्सिलोनामा ‘शत्रु गते’ ले दर्शकलाई भुइँमै बसाल्यो
२१ वर्षपछि फेरि माधुरी–संजयको जोडी पर्दामा